ब्रान्ड कपडा थोक बिक्रेता, चाँडै फेसन र आउटलेट | स्टॉकमार्का
+ 34 667 768 353
खुला कपडा स्टोर
नयाँ स्ग्रह थप जानकारी!
तपाईंको ई-कमर्स सेट अप गर्नुहोस्
एक धेरै साधारण तरीकाले तपाईं आफ्नो e-वाणिज्य सेट गर्न सक्नुहुन्छ र शिपिंग। हाम्रो क्याटलगलाई 700 भन्दा बढि उत्पादनहरू स्टकमा समाहित गर्नुहोस् र अनलाइन संसारमा सामेल हुनुहोस्।
के तपाइँसँग एक अनलाइन स्टोर छ?
यदि तपाईंसँग वेबसाइट छैन भने हामी तपाईंलाई एउटा प्रदान गर्नेछौं, जस्तो तपाईंलाई मनपर्दछ। तपाईंले छनौट गर्नुभएको डोमेन र लोगोहरूको साथ। र यदि तपाईंसँग पहिले नै यो छ भने चिन्ता नलिनुहोस्, हामी हाम्रो क्याटलग आयात उपकरण स्थापना गर्ने ख्याल राख्छौं ताकि तपाईं तुरून्त बिक्री सुरु गर्न सक्नुहुनेछ।
हामी लदानको ख्याल राख्छौं
हाम्रो Dropshipping सेवा संग तपाईंसँग सयौं सन्दर्भहरू छन् तपाईंको अनलाइन स्टोरको साथ सफलता प्राप्त गर्न। तपाईंले बेच्ने बाहेक अरू केहि चिन्ताको चिन्ता लिनु हुँदैन किनभने लदानहरू हामी द्वारा बनेका छन्।
हामी तपाईंलाई मार्केटिंगमा मद्दत गर्दछौं
हामी तपाइँलाई सामग्री पहुँच दिनेछौं ताकि तपाईं आफ्नो सामाजिक नेटवर्कमा विज्ञापन गर्न सक्नुहुनेछ। हामी सोच्दछौं कि यो इन्स्टाग्राम र फेसबुकमा विज्ञापन गर्न आवश्यक छ र यसका लागि हामी तपाईंलाई एउटा हात दिन जाँदैछौं।
तत्काल शिपिंगको साथ स्टॉकमा हजारौं उत्पादनहरू
हामी तपाईंको स्टक प्रबन्धन गर्दछौं
के तपाइँ अग्रणी फेसन, सहायक उपकरण र फुटवेयर ब्रांडका वितरक हुनुहुन्छ? हामी स्टक को प्रबन्धन गर्छौं र यो तपाईंको लागि बेच्यौं। हामीसँग अनुभव र ग्राहकहरूको विस्तृत पोर्टफोलियो छ जसलाई हामी तपाईंको स्टक पठाउन सक्दछौं र केहि चिन्ता नगरिकन यसलाई बेच्न सक्दछौं।
ब्याचमा नयाँ के छ
हामी तपाईंलाई उत्तम मूल्यमा व्यक्तिगत थोक फैशनको धेरै प्रस्ताव गर्दछौं। हाम्रा आफ्नै गोदामहरूमा सूचीको साथ तत्काल लदानका साथ उत्तम ब्रान्डहरू। हामी तपाइँको आवश्यकता र बजेट अनुकूलन।
क्याटरपिलर पुरुषहरूको एक्सेसरीस धेरै
भैंस FW महिला फुटवेयर धेरै
भैंसो एसएस महिलाको जुत्ता धेरै
Crocs जूत्ता धेरै
धेरै माइकल Kors महिला
धेरै माया मोसचिनो महिला
LiuJo महिला धेरै
लोट कार्ल लगेरफेल्ड महिला
सीएलके मेन्स पोलो टेक्सटाईल लट
Napapijri मैन वस्त्र लोट
Sorbino पुरुषहरूको वस्त्र धेरै
धेरै Fila जूत्ता पुरुष र महिला
बच्चाहरूको लागि ब्राण्ड कपडा (वसन्त-ग्रीष्म )तु)
लट क्यूगुआपा मिलानो एसएस २१
धेरै पुरुषको शर्ट
Etiem Men's Tailoring Lot
पुरुष र महिलाहरूको लागि धेरै मल्टिब्रान्ड फुटवेयर
हार्वे म्यान र महिला टेक्सटाईल धेरै
आर्टिग्ली टेक्सटाईल लोट
XTSY महिला वस्त्र लोट
फ्रान्सेसी महिला टेक्सटाईल लोट
महिलाको बहुब्रान्ड टेक्सटाईल धेरै
उपलब्ध धेरै हेर्नुहोस्
हामी तपाईंलाई प्रत्येक चरणमा साथ दिन्छौं तपाईंलाई उत्तम सेवाहरू र फेसनको दुनियामा तपाईंको यात्रालाई सफल बनाउन आवश्यक सल्लाह प्रदान गर्न।
तपाईंको शारीरिक र अनलाइन कपडा स्टोर खोल्नुहोस्
हामी तपाइँलाई दुबै प्रक्रियाको दौडान तपाइँको स्टोर सेट अप गर्न र सबै भन्दा बढि हाल र लोकप्रिय उत्पादनहरूले भर्न मद्दत गर्दछौं। र यदि तपाईंलाई यसको आवश्यक छ भने, हामी तपाईंको वेबसाइट सिर्जना गर्दछौं ताकि तपाईं अनलाइन पनि बेच्न सक्नुहुनेछ।
Dropshipping र शेयर को बारे मा भूल
हाम्रो Dropshipping सेवा संग तपाईंसँग हजारौं सन्दर्भ हुनेछ तपाईंको अनलाइन स्टोरको साथ सफलता प्राप्त गर्न। हाम्रो सूचीमा तपाईंको वेबसाइटमा जडान गर्दै र शिपिंगको ख्याल राख्दै। के तपाइँसँग वेबसाइट छैन? हामी तपाइँको लागि यो बनाउँदछौं र तपाइँ यसलाई कसरी प्रयोग गर्ने भनेर सिकाउँछौं।
अनलाइन क्याटलग लगातार अपडेट रहन्छ
हामी हाम्रो शेयरहरू नयाँ अपडेट गर्दै प्रत्येक दिन products०,००० भन्दा बढी सन्दर्भको साथ नवीकरण गर्दछौं। परामर्श ताकि तपाइँ तपाइँको ग्राहकहरु लाई के को लागी बजार को मांग को लागी प्रस्ताव गर्न सक्नुहुन्छ।
सेवा र ध्यान
स्पेन मा आधारित क्षेत्र मा उच्च प्रशिक्षित ग्राहक सेवा। युरोपभरि 30० बर्ष भन्दा बढी अनुभव र २००० भन्दा बढी ग्राहकहरूको समर्थनको साथ।
के तपाइँ अग्रणी ब्रान्डको वितरक हो? हामी स्टक को प्रबन्धन गर्छौं र यो तपाईंको लागि बेच्यौं। तपाईलाई केहि चिन्ताको चिन्ता नगरिकन हामी तपाई र अन्तिम ग्राहक बीचमा मध्यस्थको रूपमा कार्य गर्दछौं। हामी हाम्रो वितरकको a० बर्ष भन्दा बढि बर्षको शेयर ब्यबश्थित गर्दैछौं भव्य बिक्री परिणामको साथ।
हामी तपाईंलाई सबै समयमा सबै सबै सफल वितरण च्यानलहरूको लाभ लिन मद्दत गर्दछौं। दुबै भौतिक स्टोर र अनलाइन च्यानलमा बेच्दै, तपाईंको आफ्नै स्टकको साथ वा हाम्रो ड्रपशीपिंग सेवा मार्फत।
तपाइँको प्रोजेक्टको बारेमा हामीलाई भन्नुहोस्
तपाईंको भौतिक कपडा स्टोर खोल्नुहोस्
हामी तपाईंलाई तपाईंको स्टोरको ब्यबश्थापन र उत्पादनको प्रतिस्थापनमा मद्दत गर्दछौं, तपाईंसँग हाम्रो सबै अनुभव साझा गर्दै। कुनै मताधिकार, कुनै रोयल्टी, कुनै रोयल्टी, कुनै अपवर्जन छैन। स्टॉकमार्कासँग तपाईसँग स्वतन्त्रता र तपाईंको ब्यापारको पूर्ण नियन्त्रण हुनेछ यो तपाईंको इच्छा अनुसार बढाउनको लागि।
म बढी जान्न चाहन्छु
Id के तपाइँ यस सेवा को बारे मा जान्नुहुन्छ? 🧐 हामी तपाइँलाई मद्दत गर्दछौं
ApNapapijri मैन लूत https://stockmarca.com/
DThe #Dropshipping एक ढुवानी र वितरण विधि हो
EXहाम्रा अनन्य ब्रान्डहरु खोज्नुहोस्⬅ https: //
📌CROCS लूत https://stockmarca.com/portfolio-i
इन्स्टाग्राममा हामीलाई पछ्याउनुहोस्
अब सम्पर्क गर्नुहोस्।
सब भन्दा राम्रो खुट्टाको साथ तपाईंको सपनाको निर्माण सुरु गर्न हामी तपाईंलाई सबै कुरा जान्न दिनेछौं। र यदि तपाईंसँग पहिले नै स्टोर छ भने हामी तपाईंलाई हाम्रा उत्तम ब्रान्डको स्टक प्रदान गर्नेछौं ताकि तपाईंसँग त्यस्ता उत्पादनहरू छन् जुन तपाईंलाई वास्तवमै मनपर्दछ र बेच्नुहुन्छ। किनभने जम्पि sc डरलाग्दो छैन, जो डराउने कुरा जुन गर्ने जुनसुकैको साथ बाँचिरहेको छैन।
CALL US: 667-768-353
कार्यालय समय र ग्राहक सेवा: सोमबार बिहिबार बिहान :9: ०० देखि :00::17० बिहान र शुक्रबार बिहान :30:०० बिहान 8::00० बिहान।
सम्पर्क / संपर्क nosotros / विशेष ब्रान्डहरू / कानूनी / निर्यात
© 2020 स्टॉकमार्का